သတ္တုနှင့် သတ္တုမဟုတ်သော လေဆာဖြတ်စက်
အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ထိပ်တန်း လေဆာဖြတ်စက် လေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက် ထုတ်လုပ်သူ
ISO9001 EC EPA TUV ခွင့်ပြုထားသော စက်ရုံ
OEM ODM မှကြိုဆိုပါတယ်။
Allwinmac တွင် အထူးပြုသည်။ လေဆာဖြတ်စက် နှင့် လေဆာဖြတ်စက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း။. အရည်အသွေးပြည့်မီသော လေဆာစက်များ၏ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။.
5000 m² ထက်ပိုသော ခေတ်မီစက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကြီးမားသည်။, ခိုင် R&D ပညာရှင်အဖွဲ့သည် ဖောက်သည်များ၏ ပြဿနာများကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ .
စိုးနှင့်အတူ 12 နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, သို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။ 80 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။.
ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုမှ ထုတ်လုပ်မှုအထိ, အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း Allwinmac တွင်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။.
Allwinmac သည် ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံး သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် အမြဲစိတ်ထဲတွင် စွဲကိုင်ထားသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ ကြီးထွားလာရန် ကတိပြုပါသည်။.
Allwinmac သည် လေဆာဖြတ်စက်ကဲ့သို့ အကြောင်းအရာများ အကျုံးဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။, လေဆာကမ္ပည်းထိုးစက်တပ်ဆင်ခြင်း။, စစ်ဆင်ရေး, လေ့ကျင့်ရေး နှင့် တာဝန်ပေးခြင်း. 7x24 ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှု သီးသန့်အဖွဲ့သည် သင့်နောက်တွင် ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်သည်။.
Allwinmac သည် ၎င်းတို့ကို အောင်မြင်စေရန် ကူညီပေးရန် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဝါသနာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်။, လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လေဆာကမ္ပည်းထိုးနည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် လမ်းညွှန်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ .
အပြင်းထန်ဆုံး လေဆာဖြတ်စက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ & တရုတ်နိုင်ငံရှိ လေဆာကမ္ပည်းထိုးရောင်းချသူများ, Allwinmac သည် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် နီးနေပြီဖြစ်သည်။ 10 နှစ်များ.
အရည်အသွေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အဓိကကျကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်ပါသည်။, အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် မည်မျှအရေးကြီးပါသည်။, ဖြစ်နိုင်သမျှ အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်. ဟိုတုန်းက 10 နှစ်များ, we have worked with countless parts customers.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လေဆာဖြတ်စက်နှင့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အရည်အသွေးစမ်းသပ်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် ခေတ်မီနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏တာရှည်ခံမှုကို အာမခံပါသည်။, အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်. ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်း, ခိုင်ခံ့သောတည်ဆောက်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သည် Allwinmac နှင့် အဓိပ္ပါယ်တူသည်။.
Fiber Lase ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ,Fiber laser cutter လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ,ဖိုက်ဘာလေဆာစက် ,ဖိုက်ဘာလေဆာ cnc. ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် အလင်းရင်းမြစ်အဖြစ် ဖိုက်ဘာလေဆာဂျင်နရေတာကို အသုံးပြုသည့် လေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
CO2 လေဆာဖြတ်စက် ,CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ဟုလည်း ခေါ်သည်။CO2 လေဆာဖြတ်စက်သည် CO2 မော်လီကျူးများ၏ တုန်ခါမှုနှင့် လည်ပတ်စွမ်းအင်အဆင့်များအကြား ကူးပြောင်းမှုကို အသုံးပြုကာ ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ရန် လေဆာအလင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Laser Cutter အိပ်ရာ
Laser Cutting Bed ဟုလည်း Laser Cutter Bed ဟုခေါ်သည်။ The Laser Cutting Bed သည် ကြော်ငြာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အထူးထုတ်လုပ်ထားသော လေဆာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။, အလှဆင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
CCD လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ထည်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည်။, ဘောလုံးဂျာစီအပါအဝင်, ရေကူးဝတ်စုံ, စက်ဘီးစီး အဝတ်အစား, အသင်းဝတ်, ဖက်ရှင်အ၀တ်အထည်နှင့် ပုံနှိပ် vamp စသည်တို့.
Allwinmac သည် ထုတ်လုပ်မှုကို အာရုံစိုက်သည်။ လေဆာဖြတ်စက် နှင့် လေဆာဖြတ်စက် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။. သတ္တုစာရွက်များ / ပြားများအတွက်သင့်လျော်သည်။, သံမဏိ သတ္တုပြွန်/ပိုက်များ, ကာဗွန်သံမဏိ, လျှပ်စစ်သံချောင်း, သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, အလူမီနီယံသွပ်ပြား, အလူမီနီယံ, အလူမီနီယမ်အလွိုင်း, တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း, ကြေးနီ, ကြေးဝါ, သံနှင့် အခြားသတ္တုပစ္စည်းများသည် မတူညီသော အထူများဖြစ်သည်။. .Also we can give one-stop solution according to customer requirements and existing condition.
သင်၏ပရောဂျက်များကို ယခုပဲ ပစ်လွှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
Allwinmac သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ လေဆာဖြတ်စက်နှင့် လေဆာကမ္ပည်းထိုးခြင်းအတွက် သင်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။.